Ungayihlaziya njani Ubuntu 19.04 Disco Dingo | Ubunlog
Ungayihlaziya njani Ubuntu 19.04 Disco Dingo
Ewe, sele sinayo apha. Ubuntu 19.04 Disco Dingo ikhutshwe ngokusemthethweni kwaye ngoku inokufakwa phantse kuyo nayiphi na ikhompyuter. Ngoku kuvele amathandabuzo: ndenza ntoni? Ngaba ndiyifaka ukusuka ekuqaleni? Ndiyahlaziya? Ngaba ndingayinyusa ingxelo endiyisebenzisayo? Ndikuthandile ukwenza ufakelo ukususela ekuqaleni, kodwa kweli nqaku siza kukufundisa uhlaziya njani Ubuntu 19.04 usebenzisa ezona ndlela zikhuselekileyo nezikhuselekileyo.
Into yokuqala ekufuneka siyithethile kukuba Ubuntu 19.04 Disco Dingo sisindululo esiqhelekileyoOko kukuthi, kwezi zixhaswayo iinyanga ezili-9 kwaye ndingathi kufanelekile ukuzihlaziya ngokukhutshwa ngakunye, okuhambelana neenyanga ezintandathu. Abasebenzisi abakwi-Ubuntu 18.04 kufuneka bahlale kolo hlobo, okanye olo luluvo lwam xa ndicinga ukuba abangasebenzisi Ubuntu 18.10 kungenxa yokuba bakhetha iinguqulelo ze-LTS. Ngayiphi na imeko, kule posi siza kukuxelela nento onokuyenza ukuba ukule nguqulo kwaye ufuna ukusebenzisa le ikhutshwe namhlanje.
1 Indlela yokuphucula ukusuka ku-Ubuntu 18.10 ukuya ku-Ubuntu 19.04
2 Ungayihlaziya njani Ubuntu 18.04
3 Indlela ekhuthazwayo yofakelo lwexesha elizayo
Indlela yokuphucula ukusuka ku-Ubuntu 18.10 ukuya ku-Ubuntu 19.04
Ngokusengqiqweni, sonke siyazi ukuba xa kuhlaziywa inkqubo yokusebenza siza kufaka enye eyahlukileyo. Nangona kungafanelekanga, oku kunokubangela iingxaki zokuhambelana ukuba sikhe safaka ngaphambili abaqhubi abongezelelweyo. Kuyacetyiswa ukuba ungazisusi Ngaphambi kokuphucula uguqulelo olutsha lwe-Ubuntu, jonga ukuba yonke into isebenza ngendlela efanele kwaye ukuba akunjalo, buyisela kwakhona.
Ubuntu 19.04 Kuya kufuneka ibonakale njengohlaziyo lwe-Ubuntu 18.10 kuHlaziyo lweSoftware. Inkqubo yofakelo ifana kakhulu naxa sihlaziya nayiphi na iphakheji ye-APT, umahluko oya kusibonisa ukuba kukho uhlobo olutsha lwe-Ubuntu kwiwindow ekhethekileyo. Ukuba uhlaziyo aluveli, singazama ukubhala lo myalelo:
Oku kuyakwenzeka ngokude ungakhange uchukumise ukhetho lwe Isoftware kunye nohlaziyo / Uhlaziyo / Ndazise ngenguqulelo entsha yoBuntu, ethi Ubuntu 18.10 isetelwe "Kuyo nayiphi na inguqulelo entsha".
Okunye umyalelo othe ngqo kwaye iyilelwe ngokukodwa oku koku kulandelayo, ukuba nje usuku lokuqalisa lufikile:
Namhlanje lusuku lokumiliselwa, kodwa nje Sithumela i-tweet Izolo, Singazama nokuhlaziya ngaphambi kokukhutshwa, into engacetyiswayo. Ukwenza oku, kufuneka sitshintshe i-C command kumyalelo wangaphambili kwaye sibeke u-D kuyo, ngakumbi ngakumbi "-d" ngaphandle kwezicatshulwa.
Ungayihlaziya njani Ubuntu 18.04
Ubuntu 18.04 yinguqulelo yeLTS, eyahlukileyo kwiDisco Dingo. Ukuba sikule nguqulo siza kufumana ingxaki: okokuqala kufuneka sihlaziye Ubuntu 18.10 emva koko siye ku-Ubuntu 19.04. Ukuthatha ingqalelo ukuba kuya kufuneka ulayishe iinguqulelo ezimbini kunye nazo zonke iingxaki esinokuzifumana, singasathethi ke ngokuchitha ixesha, kuyacetyiswa ukuba ukhuphele Ubuntu 19.04 ISO, yenza i-USB ebukhoma kwaye, kwinkqubo yofakelo, khetha ukhetho "uHlaziyo". Ukuba ukhetho "Hlaziya" aluveli, inguqulelo kuya kufuneka ilayishwe kabini.
Oku kuyasebenza nakwiinguqulelo zangaphambili, nangona kunjalo kwiinguqulelo ezindala kungcono ukugcina zonke iifayile ezibalulekileyo kwaye uzifakele ekuqaleni. Ukufaka ukusuka ekuqaleni kuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuba siya kuthwala imiba zero ukusuka kufakelo oludlulileyo, yiyo loo nto kukhethwa mna rhoqo kwiinyanga ezintandathu (kwilaptop endibhala kuyo, iLenovo, ndiyenza rhoqo).
Kukho enye indlela yokwenza layisha ukusuka ku-Ubuntu 18.04 ukuya kwiDisco Dingo ucacisile apha. Zininzi iinguqu ekufuneka uzenzile kwaye ngokobuqu ndikhetha ukuyenza ngokuhlaziya ukusuka kwi-USB, kodwa lolunye ukhetho.
Indlela ekhuthazwayo yofakelo lwexesha elizayo
Njengoko besichazile, umzekelo, kwi esi sithubaNdicinga ukuba lolona khetho lufanelekileyo lokuhlaziya okanye ukufaka kwakhona uhlobo lweLinux kuqala kwinqanaba elidlulileyo. Into endifuna ukuyithetha yile Kufanelekile ukwenza izahlulelo ezahlukileyo ngeenjongo ezahlukeneyo, ezinjengale ilandelayo:
Isahlulelo sengcambu (/): ulwahlulo lweengcambu lufakela inkqubo yokusebenza. Kuxhomekeka kwiimfuno zethu, ulwahlulo lweengcambu lunokuba luncinci ngokwaneleyo ukusingatha inkqubo. Kwi-Acer yam ndisebenzisa njengengcambu ye-SSD yenxalenye yediski yam, eyi-128GB. Ndiyisebenzise yonke into ngenxa yokuba yonke enye i-1TB.
Ukwahlula kwifolda yobuqu (/ ekhaya): Kulapho lonke ulwazi lwethu kunye noseto zigcinwa khona. Xa ufaka inkqubo yokusebenza okanye uyihlaziya, ukuba asiyifomathi, siya kuba nakho konke ukumisela okufanayo, okubandakanya ukumiselwa kweFirefox okanye enye isoftware efana neRhafu ukuba siyifakile. Ukuba isoftware ibingafakwanga ngokungagqibekanga, ukuyifaka kuya kubuyisela ubumbeko.
Ukutshintsha okanye ukwahlula indawo yokwahlulahlula: akukho mfuneko yokuyila, kodwa kunokuba luncedo ngakumbi ukuba sihlala simisa ikhompyuter okanye senza imisebenzi enzima. Yimalini? Ewe, ngumbuzo wesigidi seedola. Akukho mntu uvumayo. Kukho iingcamango ezahlukeneyo: enye yazo ithi kufuneka ifane ne-RAM, enye ibe sisiqingatha okanye incinci ... Ndishiye i-3GB kwi-PC ene-8GB kunye ne-2 kwi-PC ene-4GB ye-RAM. Musa ukwenza impazamo yokucinga ukuba kokukhona kungcono. Ukuba usebenzisa le nkumbulo ininzi endaweni ye-RAM, ukusebenza kuya kusokola.
/ Isahlulelo sebhutsi?: Andicingi ukuba kunyanzelekile. Ngapha koko, olu hlulo lwenziwe xa kufakwa inkqubo yokusebenza kwaye kudlalwa ngezi ntlobo zesahlulelo kunokuba yingozi.
Emva kokwenza ubuncinci iingcambu kunye / nezahlulelo zasekhaya, xa sihlaziya kufuneka sikhethe ukhetho «Ngaphezulu», faka inkqubo apho sasineengcambu (/) kunye nefolda yobuqu esathi sayilungisa njenge / ekhaya. Singaziphawula ukuba zifomathiwe, ezinokuba kukufakwa kokuqala, okanye ukungafomathi enye okanye zombini. Ukuba awufuni kuphulukana nedatha yakho okanye ukumiliselwa, awunakufomatha / ekhaya.
Nokuba yeyiphi indlela, IQELA LIQALILE!
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ungayihlaziya njani Ubuntu 19.04 Disco Dingo
Kudala ndivavanya iintlobo ezahlukeneyo ze-ubuntu 19.04 kwi-hp dc5700 pc yedesktop, kule khompyuter ndinezithethi ezimbalwa ezidityanisiweyo, zona zonke i-distros endizifakileyo zenza isandi (kufana ne-TAC TAC) Phambi kwesikrini sokuqala, isandi sithi sesomzuzwana, emva koko umsebenzi uqhelekile, inyani kukuba ngo-19.04 isandi esinjalo asimisi, kuba siqala kufakelo lwe-usb, emva kofakelo, kwaye kamva ngexesha leseshoni, oku Kwenzekile ngobuntu, ubuntu budgie kwaye ngalo mzuzu no-lubuntu, bendifuna ukutshintsha ikernel ndenze eyakudala kodwa iphawula iimpazamo, ingaba ikhe yenzeka komnye umntu?
Ukukhutshwa kweCanonical Ubuntu 19.04 Disco Dingo. Khuphela ngoku